I-pluton (ebizwa ngokuthi "i-PLOO-tonn") i-intrusion ejulile yedwala, umzimba owenzela indlela eya kwiindawo ezinokuqhaqhazelayo (i- magma ) ngeekhilomitha eziliqela ngaphantsi komhlaba kwi-Earth crust and solidified. Ngaloo bunzulu, i-magma ihlile kwaye ikhutshwe ngokukhawuleza, ivumela ukuba izityalo zamaminerali zikhule zikhulu kwaye zivalwe ngokungqongqo-eziqhelekileyo zamatye ase-plutonic .
Ukunyanzeliswa okungaqhelekanga kunokuthiwa yi-subvolcanic okanye i-hypabyssal intrusions.
Kukho ukubethelwa kweengqamaniso ezinokwakheka ngokusekelwe kubukhulu be-pluton kunye nesimo, kufaka phakathi i-humanslith, i-diapir, intrusion, i-laccolith kunye nesitokisi.
I-pluton ebonakaliswe kumhlaba womhlaba iye yawa ngxondorha ephezulu. Ingayimela inxalenye enzulu yendlu egxininisayo eyayidla umlingo kwi-volcano ende ende, njenge-Rock Rock ngaseNyakatho-ntshona yeNew Mexico. Inokuthi ibhekise ekamelweni le-magma engazange lifike phezulu, njengentaba yaseYergia . Indlela yonyani yonyani yokwahlula imephu kunye nokuhlalutya iinkcukacha zamatye abonakaliswe kunye ne-geology yeenxa zonke.
"I-Pluton" iyigama eliqhelekileyo elijongene neentlobo ezahlukeneyo zobunjwa ezithathwe ngamalungu omagma. Oko kukuthi, i-pluton ichazwa ngokufumaneka kwamatye ase-plutonic. Amashishithi adibeneyo asemagqabini afaka i-sills kunye nama-dikes angamanga angaba nemputon ukuba idwala ngaphakathi kwabo liqiniswe ngokubanzi.
Ezinye iiplutoni zineengqungquthela ezinobumba ezinophahla kunye nomgangatho. Oku kungaba lula ukubona kwi-pluton eyayixubha ukuze ukuguguleka kwinqumle kuyo. Ngaphandle koko, kungathatha ubuchule be-geophysical ukujonga ibala le-pluton yesithathu. I-pluton eyenziwe nge-blister eyaphakamisa iindonga ezithintekayo kwi-dome ingabizwa ngokuba yi-laccolith.
I-pluton eyenziwe ngamakhowa ingabizwa ngokuba yi-lopolith, kwaye enye i-cylindrical ingabizwa ngokuthi yi-asmithith. Le mijelo yendlela ethile eyondla i-magma kubo, ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-feeder dike (ukuba isicaba) okanye isitokisi (ukuba ijikeleze).
Kukho ukusetyenziswa kwegama elipheleleyo lamanye amacwecwe aseputon, kodwa ayisebenzisi kakhulu kwaye ayishiywe. Ngowe-1953, uCharles B. Hunt wayehlekisa ngabo kwi-USGS Professional Paper 228 ngokuphakamisa igama elithi "cactolith" kwi-pluton enemibala: "I-cactolith yi-chonolith ye-quasihorizontal eyenziwe ngama-ductoliths anastomosing, ajikeleza i-curol njenge-harpolith, ngathi i-sphenolith, okanye i-bulge ngokungafaniyo njenge-akmolith okanye i-ethmolith. " Ngubani othe i-geologists ayinakuyihlekisa?
Emva koko kukho i-pluton engenawo umgangatho, okanye akukho ubungqina bunye. I-plutons engaphantsi kwezi zinto zibizwa ngokuba ngama-stocks ukuba zincinci kuneeekhilomitha ezili-100 zeekhilomitha ububanzi, kunye ne-humanslith ukuba zikhulu. EUnited States, i-Idaho, iSierra Nevada kunye nePeninsular yabantuliths zizona zikhulu.
Ukubunjwa kunye nexesha elide le-pluton liyimfuneko ebalulekileyo yesazinzululwazi. I-Magma ayincinci kuneliwa kwaye iyakhula njengemizimba enobuhlungu. I-Geophysicists zibiza loo mizimba idiapirs ("DYE-a-peers"); omnye umzekelo.
I-pluton inokuthi iyancibilike indlela yabo phezulu kwinqanaba elisezantsi, kodwa kunzima ukufikelela kwindawo ebandayo, ebusweni obuphezulu. Kubonakala ngathi badinga uncedo oluvela kwii-tectonics zengingqi ezithatha i-crust apart-into efana neentaba ezinqabileyo. Ngaloo ndlela, i-pluton, kunye ne-humansliths, ihamba kunye neendawo ezincinci ezenza i-arc volcanism.
Kwiintsuku ezimbalwa ngo-2006, i-International Astronomical Union yayicinga ukuba inike igama elithi "plutons" kwiimpawu ezinkulu engxenyeni yangaphandle yesimiso sobusuku, ngokucacileyo becinga ukuba iya kuthetha "izinto ezifana nePluto." Baye bacinga ngegama elithi "plutinos." I-Geological Society yaseMelika, phakathi kwezinye izigxeko zesiphakamiso, yathumela ukubhikisha ngokukhawuleza, kwaye iintsuku ezimbalwa emva koko i-IAU yanquma kwisichaso sayo se-epochal esithi "iplanethi eninzi" eyayisusa iPluto kwirejista.
(Jonga Yintoni iPlaneti?)